Zencastr: Si fudud ugu duub Wareysiyadaada Podcast khadka tooska ah | Martech Zone
Khamiis, Maarso 2, 2017 Jimce, Maarso 3, 2017 Douglas Karr
Saaxiib iyo sayid hal abuur leh oo dhan waxa la podcasting waa Jen Edds ka Shirkadda Brassy Broadcasting. Marar badan ma arko iyada, laakiin markaan sameeyo had iyo jeer waa qosol badan. Jen waa hal shaqsi oo karti badan - waa qof qosol badan, iyadu waa muusikiiste karti iyo heesaa leh, iyaduna waa mid ka mid ah kuwa ugu khibradda badan Podcasters-ka aan aqaano. Marka, layaab maleh markii ay ila wadaagtay qalab cusub oo laga yaabo inay dan kuu tahay dadweynow - Zencastr.
Haddii aad tahay podcaster halyeey ah, fursadaha ayaa ah inaad leedahay a guddiga fiicni iyo mikrofoonno badan iyo sameecado waaweyn. Haddii aad tahay podcaster cusub, waxaad yeelan kartaa a fiicni digital. Kakanaanta ayaa bilaabmaysa markaad rabto inaad keensato marti fog. Waxaan diyaarinay kuweena Istuudiyaha 'Indianapolis Podcast' oo leh Mac Mini iyo laba isdhexgal maqal USB ah si loo soo saaro Skype ama maqal kasta oo kale oo loogu daro qaskeena.
Intaas oo ay xallinayso tikniyoolajiyadda, markaa waa inaad xarig-miiraha isku-darkaaga ama barnaamijkaaga isku-darka dijitaalka ah si aad ugu soo saartaan qolyaha istuudiyaha ku jira baska u baxa dadkiinna internetka. Oo waa inaad hubisaa inaadan dib u dhigin codka martidaada haddii kale, martidaada internetka ayaa maqli doonta dhawaq. Kaliya arrimahaas ma lihid, laakiin barnaamijyo badan oo isgaarsiineed oo khadka tooska ah ah (sida Skype) ayaa codka hoos u dhigaya. Waxay la mid tahay maqalka qof wacaya raadiyaha taleefankooda.
Intaas oo dhan ma heshay? Haa… aad ayey u jahwareertay mararka qaarkood. Waxaan la shaqeeyay maxalliga injineer maqal ah Brad Shoemaker iyo injineerada Behringer si ay wax walba si sax ah ugu shaqeeyaan waxaanan ku tijaabinay farabadan oo maqal maqal ah oo loogu talagalay duubista khadka tooska ah ee internetka.
Dabcan, tan uma baahnid tan tan Zencastr waa halkan! In kasta oo ay jiraan barxado kale oo khadka tooska ah ah oo wax lagu duubo - sida BlogTalkRadio (waanu ka tagnay maxaa yeelay kamaanaan duubi karin codka tayada leh khadka tooska ah), Zencastr duubis tayo sare leh waxaana loo dhisay boodhadh laga yaabo inay yeeshaan dhowr marti oo ka kala yimid meelo kala duwan.
Zencastr wuxuu lamid yahay heyste duubo daruuraha dhexdeeda, xitaa wuxuu leeyahay awoodo isku darka xadidan:
Raadraac gooni ah oo martida ah - Zencastr wuxuu cod kasta ku diiwaan galiyaa deegaan tayo sare leh. Joojin dambe uma sii socon doonto xiriir xun. Majiro wax isbadal ah oo dheeri ah inta lagu jiro bandhiga. Wax kale maahee waa maqal cad oo cad.
Ku diiwaangeli WAV aan khasaaro lahayn - Ha u tanaasulin tayada. Zencastr waxay ku diiwaangelisaa martidaada 16-bit 44.1k WAV oo aan khasaaro lahayn si aad u hesho codka ugu fiican ee suurtogalka ah ee aad ku shaqeyn karto.
Boodhadh loogu talagalay Tafatirka Tooska ah - Gali gelintaada, xayeysiiskaaga, ama maqalkaaga kale sida tooska ah ee aad wax duubeysid. Tani waxay kaa badbaadinaysaa waqtiga ay kugu qaadanayso inaad ku saxdo kuwan inta lagu jiro dib-u-dhalashada.
Dhisay VoIP (Voice over IP) - Looma baahna in la isticmaalo adeeg dhinac saddexaad ah sida Skype ama Hangouts. Waad kula hadli kartaa martidaada si toos ah Zencastr.
Soosaarid otomaatig ah - Abuur hal waddo oo isku dhafan oo leh qalab dheeri ah oo maqal ah oo la adeegsado loona beddelo duubistaada isku-darka xirfadleyda diyaar u ah daabacaadda
Isdhaxgalka Cloud Drive - Duubistaada waxaa si otomaatig ah looguugu keenayaa koontadaada 'Dropbox' si loogu sameeyo tafatir iyo wadaagid fudud. Google Drive ayaa soo socda.
Haye… oo haddaad bilowdo, Jen wuxuu diyaariyey koorso dhammaystiran bilaabaya barnaamijkaaga gaarka ah taasi waa waajib!
Tags: dhaqankafiicni digitalfiicnipodcastingzencastr
Waa maxay Xayeysiinta Dhaladka ah?